Safidy handefasana sary avy amin'ny fitaovana Android mankany Mac | Avy amin'ny mac aho
Ignacio Sala | | Solosaina Mac, Tutorials
¿Ahoana ny famindrana sary avy amin'ny finday Samsung mankany amin'ny solosaina? Na dia isan-jato be aza ny mpampiasa Mac dia manana iPhone, ity fitsipika ity dia tsy marina 100%. Imbetsaka, indrindra tamin'ny fotoana nandraisan'ny orinasa monina Cupertino fandefasana fitaovana misy efijery lehibe kokoa, izay nitranga tamin'ny fahatongavan'ilay iPhone 6 sy 6 Plus tamin'ny 2014, maro ireo mpampiasa izay talohan'ny nanombohan'ny modely niaraka tamin'ny 4,7 ary ny efijery 5,5-inch dia efa nanjary reraky ny efijery 4-inch, izay nitaredretra ihany koa hahatratra ny tsena.
Apple dia tsy mbola fantatra noho ny fanavaozana ny haben'ny efijery, saingy toa ny hevitra hoe ny haben'ny 5 santimetatra no mety indrindra raha ny filazan'ny orinasa voalazan'ny dokam-barotra, satria amin'ny ankihibenay sy amin'ny tanantsika iray dia afaka midira amin'ny safidy rehetra aseho eo amin'ny efijery. Raha ny tena manokana dia saika nampiditra ny tenako tao anatin'izany vondron'olona izany aho rehefa namoaka ny iPhone 5s ny orinasa miaraka amin'ny haben'ny efijery tsy mampihomehy raha oharina amin'izay natolotry ny fifaninanana.
Amin'izao fotoana izao na avy amin'ny zanatany na avy amin'ny fampiharana an'ny antoko fahatelo dia manana safidy isan-karazany izahay ahafahantsika mamoaka ny sary rehetra ary mampifandray Android amin'ny Mac. Ny rindranasa natolotry ny mpanamboatra anay handika atiny amin'ny finday Android, raha mbola manana fampiharana ho an'ny Mac izy ireo, mamela anay handika rakitra fotsiny amin'ilay fitaovana fa tsy hamoaka azy io, ka tsy ho vahaolana tena izy amin'izay ilainay izany. esory ireo sary sy horonan-tsary ananantsika amin'ny finday avo lenta.
1 Mampifandray Android amin'ny Mac hamindrana sary
1.1 Famindrana sary avy amin'ny Android mankany Mac miaraka amin'ny sary
1.2 Mandefasa sary avy amin'ny Android mankany Mac Miaraka amin'ny fampiharana Photos
1.3 Amin'ny alàlan'ny Preview
1.4 Famindrana rakitra Android
1.5 Wireless miaraka amin'ny AirMore
1.7 Avy amin'ny karatra SD mivantana
2 Solony handefasana sary avy amin'ny finday mankany amin'ny solosaina
2.1 Raha sary vitsivitsy fotsiny no resahina ...
2.2 Mampiasà Google Photos
Mampifandray Android amin'ny Mac hamindrana sary
Para mamindra ny rakitra amin'ny Android ho Mac, voalohany indrindra dia tsy maintsy mampifandray ny fitaovantsika Android amin'ny alàlan'ny fifandraisana USB amin'ilay fitaovana isika. Manaraka izany, miankina amin'ny kinova Android izay napetrakay amin'ny Smartphone, dia haseho safidy maromaro isika, mba hahafahantsika misafidy ny karazana fifandraisana tiana apetraka amin'ny Mac.
Amin'izay tranga mitondra antsika dia manana safidy roa hisafidianana isika: Famindrana rakitra (MTP) sy fomba fitehirizana masinina (MSC). Ireo safidy roa ireo dia ahafahantsika mamindra ny atiny avy amin'ny telefaona sy ny karatra SD mankany amin'ny Mac. Raha vantany vao nampifandraisintsika tamin'ny Mac ny fitaovana ary nifidiananay ny iray amin'ireo safidy roa, dia misy safidy iray ihany no hita ao amin'ny terminal sasany, dia hiainga isika avy eo iray amin'ireto safidy manaraka ireto.
Famindrana sary avy amin'ny Android mankany Mac miaraka amin'ny sary
Ny rindranasan'ny Image Capture izay napetraka tamina OS X, dia ahafahantsika mahazo ireo sary izay notehirizinay tao anaty fitaovana rehetra ampifandraisinay amin'ny Mac, ao anatin'izany ny scanner. Mba hanaovana izany dia mandeha amin'ny Launchpad> Hafa isika ary tsindrio ny sary fisamborana.
Manaraka, haseho ny fikandrana fampiharana, izay hiseho eo amin'ny ilany ankavanana sy amin'ny ilany havia ny anaran'ny fitaovana ampifandraisina hiseho ny sary rehetra izay eo amin'ny fitaovana ankehitriny.
Izao dia mila misafidy ireo sary sy horonan-tsary rehetra tadiavinay hivoaka avy amin'ny Smartphone Android izahay ary hamindra azy ireo amin'ny fampirimana izay itahirizantsika azy ireo misintona azy ireo fotsiny. Na azontsika atao ny manafatra azy ireo mivantana amin'ny rakitsary Images amin'ny Mac misy ny safidy aseho eo ambanin'ny fampiharana.
Mandefasa sary avy amin'ny Android mankany Mac Miaraka amin'ny fampiharana Photos
Ny fampiharana Photos dia safidy hafa azontsika ampiasaina hitrandrahana ny atiny amin'ny Smartphone Android. Raha tsy notantananay ny rindran-tsary ka hisokatra ho azy isaky ny mampifandray fitaovana misy sary na horonan-tsary izahay, rehefa mampifandray ny finday avo lenta Android dia hanokatra ho azy ny fampiharana Photos ary hasehony antsika ny atin'ny fitaovana tiantsika hakana ny atiny amin'ny endrika horonan-tsary na sary.
Raha tsy misokatra izy io dia mila tsindrio fotsiny ilay rindran-tsary mba hiseho ny atiny rehetra voatahiry ao amin'ny karatra SD an'ny terminal anay. Avy amin'ilay rindranasa mihitsy no ahafahantsika misafidy ny atiny voatahiry ary manafatra azy ao anaty fampirimana izay manapa-kevitra, amin'ny alàlan'ny default, ilay antsoina hoe Import. Vantany vao vita ny fanafarana, avy amin'ny sary dia afaka miroso isika hamafa ny rakitra rehetra izay efa nampidirinay tamin'ny Mac. Azontsika atao ihany koa ny misintona ny atin'ny finday avo lenta mankany anaty fampirimana ao amin'ny Mac.
Amin'ny alàlan'ny Preview
Ny fampiharana Preview misy ao amin'ny Launchpad dia mamela antsika hahazo ireo sary voatahiry ao amin'ny fitaovantsika ihany koa. Mba hanaovana an'io dia mila manokatra ny rindranasa fotsiny isika ary mankeny amin'ny File> Import avy amin'ny "anaran'ny karatra SD". Avy eo ny sary rehetra voatahiry ao amin'ilay fitaovana dia haseho ary hitohy amin'ny fomba mitovy amin'ny safidy hafa isika, amin'ny fisafidianana ireo sary sy horonan-tsary tianay havoaka ary hisintona azy ireo mankany amin'ny lahatahiry tiana hitahiry azy ireo.
Famindrana rakitra Android
Google dia manome ho an'ny mpampiasa Mac ny fampiharana Android File Transfer, fampiharana ahafahantsika mampifandray ny fitaovantsika Android, na takelaka io na finday avo lenta mankany amin'ny PC na Mac ka afaka mamoaka ny atiny voatahiry ao anatiny. Alohan'ny hametrahana sy hampandehanana azy dia tsy maintsy mandeha any amin'ny System Preferences> Fiarovana sy fiainana manokana ary ao anatin'ny safidy isika Avelao ny fampiharana alaina avy: tranokala misy, satria raha tsy izany dia tsy afaka mihazakazaka ny fampiharana Android File Transfer izahay.
Mba hahafahantsika mamoaka ny atin'ny Android Smartphone, mila mifidy ireo singa izay tiana esorina fotsiny isika ary hisintona azy ireo mankany amin'ny folder Finder izay itahirizantsika azy ireo. Ity fampiharana ity dia ny fomba tokana ananantsika hidirana amin'ny atin'ny fitaovantsika raha teo no nitahianay ireo sary sy horonan-tsary tianay hafindra fa tsy amin'ny karatra fahatsiarovana.
Wireless miaraka amin'ny AirMore
AirMore dia rindrambaiko ho an'ny ekosistema Android izay mamela antsika hitantana tsy ny sary sy ny horonan-tsarimihetsika finday Android, fa mamela antsika ihany koa tantano ny karazana rakitra voatahiry ao amin'ny finday avo lenta na ny takelaka Android ary mamela antsika hamindra vaovao marobe amin'ny hafainganam-pandeha fa tsy mampiasa tariby.
Mila misintona ny rindranasa ao amin'ny terminal fotsiny izahay ary manokatra ny Tranonkala AirMore. Raha vantany vao nosokafana isika dia tsy maintsy mijery ny kaody izay hita ao anaty tranokala mba hampifandray ny Mac amin'ny finday avo lenta. Ilaina ary amin'ny lafiny hafa lojika, izany ny fitaovana roa dia mifandray amin'ny tamba-jotra Wi-Fi iray ihany.
Raha vao mifandray, dia haseho anay ilay mpitety tranonkala ny fampahalalana rehetra notehirizinay tao amin'ny terminal Android anay milahatra isan-tsokajy, na sary, horonan-tsary, mozika, sarimihetsika, fifandraisana, hafatra ... Raha vantany vao nifantina ireo sary tianay hongotana izahay dia mila tsindrio fotsiny amin'ny fampidinana mba hanombohany misintona amin'ny Mac.
doubleTwist Sync dia fampiharana izay mitovy amin'ny iMazing ny fandidiana fantatra kokoa amin'ny anarana DiskAid, izay mamela ny fidirana amin'ny atiny rehetra ato amin'ny fitaovantsika toa ny iPhone. Ity rindrambaiko ity dia ahafahantsika mamoaka haingana ny atiny rehetra amin'ny fitaovantsika haingana sy mora, toy ireo safidy hafa, mitaritarika ireo sary sy horonan-tsary rehetra tianay sintonina amin'ny Mac.
Avy amin'ny karatra SD mivantana
Ity dingana ity no haingana indrindra sy mora indrindra amin'ny rehetra, satria tsy mila izany fotsiny isika esory ny micro SD ary ampidiro ao anaty adaptatera ho an'ny karatra SD lehibe kokoa dia ampidiro ao amin'ny Mac. Avy eo dia hiseho eo amin'ny birao misy ny Mac ny kisary misy ny anaran'ny karatra data izay nampidirintsika. Amin'ny fipihana eo amboniny dia hiseho ireo lahatahiry samihafa, izay itehirizana ny data rehetra ao amin'ny fitaovantsika. Azo inoana fa ny sary sy horonan-tsary dia voatahiry ao amin'ny folder DCIM, izay ahitana ny sary rehetra azontsika amin'ny alàlan'ny WhatsApp, Telegram, mailaka dia tehirizina ihany koa ...
Solony handefasana sary avy amin'ny finday mankany amin'ny solosaina
Raha sary vitsivitsy fotsiny no resahina ...
Rehefa tsy mila maka sary roa, telo na efatra fotsiny amin'ny finday avo lenta isika dia azo inoana fa manahirana ny fanaovana izany rehetra izany, ary mila vahaolana haingana isika hahafahana mizara na mitahiry ireo sary ireo. Raha izany no izy, ny zavatra tsara indrindra azonao atao dia ny alefaso amin'ny alàlan'ny paositra ireo sary ary sintomy amin'ny Mac-nao izy ireo.
Mampiasà Google Photos
Ny safidy tsara indrindra hijerena haingana sy ny fahazoana mampiasa ny sary rehetra raisinay amin'ny terminal Android anay dia ny fampiasana ny Google Photos application ao amin'ny terminal-nay. Ity fampiharana ity ampidiro ao amin'ny rahona Google ny sary sy horonan-tsary rehetra alainay, Google Drive, mba hahafahantsika miditra haingana ao amin'ny Mac amin'ny alàlan'ny tranokala tianao indrindra.
Google dia mamela antsika hitahiry ao anaty rahona ny sary rehetra izay namboarina tamin'ny finday avo lenta tsy voafetra raha toa ka tsy mihoatra ny 16 mpx ny vahaolana. Ho fanampin'izay dia afaka mitahiry ireo horonan-tsary rehetra noraketinay koa izahay. Amin'ity tranga ity dia misy fetra, satria ny atiny rehetra voarakitra ao amin'ny kalitao 4k dia hovaina ho tonga amin'ny vahaolana Full HD raha te-hanohy hitahiry izany maimaimpoana ao amin'ny kaontinay Drive izahay.
Raha tsy te hampiasa Google ianao, satria manohitra ny fanelingelenana ny fiainantsika manokana isaky ny mandefa na mandray mailaka izahay, dia azonao atao ny mampiasa serivisy fitahirizana rahona hafa toa ny Dropbox, OneDrive, Mega, Box Avelany ihany koa izahay hametraka ho azy ireo sary rehetra alainay avy ao amin'ny terminal mba hidirana amin'ny alàlan'ny browser. Mampalahelo fa ny serivisy tokana manolotra anay fitehirizana tsy manam-petra ho an'ny sarinay sy ny horonan-tsary rehetra ao amin'ny vahaolana Full HD dia ny Google.
Mampiasa fomba hafa ve ianao amin'ny mamindra ny rakitra amin'ny Android ho Mac? Lazao aminay ny fomba fanaovanao izany sy ny fomba arahinao mba handefasana sary avy amin'ny finday mankany amin'ny solosaina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Safidy handefasana sary avy amin'ny fitaovana Android mankany amin'ny Mac
Tsy miseho ilay fitaovana, noho izany, tsy haiko ny manao azy ... misaotra anao na ahoana na ahoana.
Salama Toni, inona ilay fitaovana? Nanandrana ny fampiharana Android File Transfer ve ianao? Inona ny OSX anananao?
fako. aza mandany ny fotoananao, manana Galaxy S5 aho ary Macbook Air farany ary tsy misy mandeha ny safidy eto amin'ity forum ity. aza lany andro eto.
Nividy Galaxy S5 aho ary tiako ho fantatra ny fomba namahanao azy. Misaotra anao.
Valiny tamin'i Karin
Salama tsara ry Jordi, ahoana no ahafahako misintona ireo sary avy amin'ny rok vyola motorola mankany amin'ny mac pro ary avy eo misintona azy ireo amin'ny pendrive manomboka izao dia misaotra betsaka
Ny safidy tsara indrindra androany dia toa PhotoSync amiko, hanao lahatsoratra miaraka aminy izahay 😉
Salama! Mampiasa "famindrana rakitra Android" aho fa tsy afaka mahita sary kely momba ny sary kely hahafantarana hoe iza no tiako ampitaina. Ny ataoko?
YANETT dia hoy izy:
Salama e!!! Ahoana no ahafahako mamindra sary avy amin'ny Android mankany MacBook amin'ny alàlan'ny Bluetooth?
Valio amin'i YANETT
Salama YANETT, zahao ity: https://www.soydemac.com/photosync-transfiere-las-fotos-entre-dispositivos-y-el-mac/
deiby dia hoy izy:
Alefako eo afovoany ny sary ary ny zavatra ratsy indrindra dia nomeko hamafana rehefa nandalo azy ireo.fffff very ny ankamaroako niaraka tamin'ilay sary nalaina. Ity an'ny mac dia mankaleo ahy ny tsy fisian'ny fifanarahana amin'ireo hafa.una m ……
Mamaly an'i deiby
Olana mitovy. Tsy miseho ilay fitaovana, fa ny batery fotsiny no ampandoaviny. Tsy ilaina ny famindrana rakitra Android. Rehefa fantany ilay fitaovana (android taloha taloha) Ny safidy hanovana azy amin'ny kapila mafy ary hametaka azy eo amin'ny birao tsy misy olana dia miseho ao amin'ny android, amin'ny safidy antsoina hoe activate mass storage. Noho izany dia tsy mila fampiharana fanampiny ianao hiasa amin'ny lahatahiry ara-dalàna. Amin'izao fotoana izao dia mitranga amiko ao amin'ny Galaxy tab 2, telefaona vaovao avy any Woxter ... ary azo antoka fa misy zavatra maoderina moderina. Manana tablette crappy avy amin'ny fnac aho izay miasa amin'ny Pm.
mpitsara amolestalo dia hoy izy:
Tena tsara !! Misaotra betsaka, hisintona lafo vidy, ny antsipiriany sisa tokony hazavaina dia ny tsy maintsy apetraka ao amin'ny telefaona «fifandraisana PC amin'ny alàlan'ny USB, amin'ny fakan-tsary Camera (PTP), farafaharatsiny ao amin'ny ZTE Blade V580. ary miaraka amin'izay tsy misy olana ny nanombohana ny famindrana.
Valiny amin'ny amolestaloarbitro
juancography dia hoy izy:
Eo ambanin'ny fandraisako anjara feno fanetren-tena milaza fa tsy nanandrana ireo safidy hafa rehetra nasehonao tamin'ny lahatsoratra aho, tena tsara tamin'ny lafiny iray hafa, fa kosa hampiharako ny endrika misy ahy ankehitriny satria mitovy amin'ny toe-javatra misy ahy (mac-android).
Mampiasa ny zava-drehetra amin'ny alàlan'ny browser Chrome aho, nampidiriko ny extension / application "airdroid" ary raha ataonao amin'ny session chrome tsara kokoa ianao na tsy maintsy atao, hilazana fa manana ny app ho an'ny mac koa izy, saingy mampiasa toy ny fampiharana Chrome, tsy maintsy apetrakao ao amin'ny android ihany koa ny airdroid, avy eo sokafanao amin'ny chrome ilay application, sokafy amin'ny android, ary apetraho ny url na tsara kokoa toa ny fampiasako ny scan code qr izay manana ny fampiharana finday ( airdroid) Nojereko ny kaody izay hita eo amin'ny efijery chrome amin'ny mac sy "vuala" sary fampirimana finday rehetra sary, antontan-taratasy, fanaraha-maso ny finday ary saika izay rehetra azonao atao amin'ny finday tsy mila tariby raha mbola eo ny finday sy ny mac amin'ny tambajotra iray ihany, satria tsy mampifandray azy ireo amin'ny tariby aho. (izay azo atao koa)
Raha ny fijeriko azy dia somary feno ary tena mandaitra ihany koa, nampiasa rafitra hafa aho taloha ary farafahakeliny 1 taona izany no lalako ary tsy manova azy aho satria raha ampiasanao amin'ny chrome ho fanitarana dia tsotra fotsiny ny sokafy ny session misy anao amin'ny solosaina pc na mac an'izao tontolo izao ary efa vonona hampiasa io fitaovana io ianao,) izany no antony nilazako teo aloha hoe hampiasainao amin'ny session ve ianao, saingy tsy voatery.
Mba hanandrana ny loko ary azo antoka fa misy mpampiasa hafa hanokatra loko tsara kokoa, saingy ity no atoro anao anao farafaharatsiny mba andramo.
Miarahaba anao ary izay nolazaina tena tsara lahatsoratra
Valiny momba ny tantaram-pitiavana
Misaotra betsaka noho ny fanazavanao, fa manana olana mitovy amin'ny sain'ny olona rehetra aho. Galaxy Android (vaovao) ary rivotra Macbook (koa) fa tsy misy ………. Apple dia tsy mahatakatra mihoatra ny Apple.
Ho an'ny ambiny, mila mampiasa tetika hafahafa foana ianao na olona iray izay mazava tsara izany.-
Mba hanaovana ilay lahatsoratra dia nanandrana ny safidy rehetra aho tamin'ny Xperia Z3 sy Smartphone mahazatra amin'ny Android 4.4. Tsy mety aminao koa ny Android File Transfer? Miasa amin'ny terminal rehetra tsy misy olana izany.
Adrian gonzalez dia hoy izy:
Andramo Sunshine, ny marina dia miasa tsara eo anelanelan'ny Samsung S5 sy Mac izy io. Tsy mampiasa serivisy rahona izy ity mba hahafahanao mamindra haingana kokoa ireo rakitra ary voatahiry ao amin'ilay fitaovana izy ireo. Fa avy eo, toy ny amin'ny rahona ihany, azonao atao ny miditra amin'ireo rakitra raha tsy misintona ianao. Ny marina dia tena tsara i Sunshine
Valiny tamin'i Adrian Gonzalez
Gaby muñoz dia hoy izy:
Salama ! Niezaka ny hamindra ny sary avy amin'ny finday avo lenta, Samsung J7, ho an'ny mac desktop aho, nampidina ny rindranasa "Android File Transfer" aza aho ary tsy mivoaka ny sariko na topi-maso, tsy amin'ny sary, na aiza na aiza ... Afaka manohana ve ianao? Misaotra anao!
Valiny tamin'i Gaby Muñoz
Salama, ahoana no nampita ny sariko tamin'ny Mac nataoko rehefa hitako izy ireo, bitika kely izy ireo, misy vahaolana, misaotra
Tena nanampy be izany, misaotra.
Hugo Pineda dia hoy izy:
Nampiasa AirMore aho ary namaha ho ahy ny zavatra tsy vitako tamin'ny zavatra na olona hatry ny ela. Misaotra betsaka tamin'ny tolo-kevitra !.
Valiny tamin'i Hugo Pineda
tsy misy ilana azy mihitsy, ny olana dia tsy miseho ny fitaovana android rehefa ampifandraisiko amin'ny mac.
LauCli dia hoy izy:
Tsara izany, saingy alohan'ny tsy maintsy hijerako ireo fampianarana YouTube marobe mandra-pahitako ny lakilen'ny Huaweii mba ho hita amin'ny Mac. Ankehitriny farany, mety amiko izany. Raha ny fanazavana, mbola tena vaovao be amin'ny mac aho ary tsy mazava amiko. Aiza ireo sary nohafarana no tokony hotehirizina?
Valiny amin'i LauCli
Miankina amin'ny fomba ampiasainao izany. Raha esorinao mivantana avy amin'ny findainao izy ireo dia azonao atao ny mandika sy mametaka azy ireo amin'izay tianao, ny birao nefa tsy mandeha lavitra ary avy eo mamindra azy ireo amin'izay tianao.
Raha mampiasa ny fampiharana Photos ianao, dia hijanona ao anatin'io fampiharana io ireo sary nafarana, na dia mazava ho azy aza, azonao atao ny mamindra azy ireo amin'izay tianao.
Ramatoa dia hoy izy:
Salama, tena tsy misy dikany aho amin'iny ary mila fanampiana aho, manana sansung galaxi vakizoro 2 aho ary mila maka ny sary ary mamindra azy ireo amin'ny karatra ivelany fa tsy afaka, raha misy afaka manampy ahy dia hankasitraka aho tena be io
Mamaly an'i Ladys
Notsapaiko ny AirMore niaraka tamin'i Xiaomi sy Mac ary tonga lafatra izany!
Misaotra betsaka amin'ny lahatsoratra 🙂
Nohelia dia hoy izy:
Mahamenatra ny mino fa nanampy ahy izy ireo saingy tsy dia azoko hoe tsy azony aho, manana finday marika Huawei aho,
Mamaly an'i Nohelia
Navarro dia hoy izy:
Tena tsara, nanandrana fomba an'arivony aho ary nisintona rindranasa ary tsy nisy, nataoko tamin'ny fakana sary ary tonga lafatra ny zava-drehetra. Misaotra indrindra anao.
Valio amin'i Navarro
shareitjava dia hoy izy:
Mampiasa fampiharana azo ampiharina kokoa aho antsoina hoe Shareit, ampiasaiko handefasana rakitra avy amin'ny sehatra rehetra mankany amin'ny finday tena mora, tsy mila tariby akory izy na tsy karazana pairing eo anelanelan'ny fitaovana, mitovy amin'ny bluetooh fa miaraka amin'ny hafainganam-pandeha avo kokoa, raha ianao maniry misintona mizara Azon'izy ireo atao izany amin'ny fivarotana kilalao satria maimaim-poana izany ary tsy misy dokambarotra manelingelina
Valio i shareitjava